Hiiraan Online News About Somalia » XOG: Senator Cumar C/rashiid oo Imaaraadka Wakiil uga ah dhaqaalo lagu bixinay hirgelinta Heshiiska DP World & Somaliland
XOG: Senator Cumar C/rashiid oo Imaaraadka Wakiil uga ah dhaqaalo lagu bixinay hirgelinta Heshiiska DP World & Somaliland
Ra’iisal wasaarihii hore ee Soomaaliya ahna Senator ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya Cumar C/rashiid ayaa la sheegayaa inuu wax badan ka ogyahay heshiiska ay wada galeen Somaliland,Shirkadda DP World iyo Dowladda Itoobiya.
Senator Cumar C/rashiid oo saaxiib dhow la ah ayaa la ogaaday inuu wax la wado Imaaraadka carabta,islamarkaana fududeeye ka ahaa Heshiiskaan.
Heshiiskan oo markii hore loo soo bandhigay Dowladda Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha Soomaaliya ayaa iska diiday,waxayna shirka DP World u soo martay xubno ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya oo mucaaradka ku ah Dowladda Farmaajo kana mid yahay Cumar C/rashiid.
Sidoo kale,hadda waxaa socda mooshin laga keenayo shirkadda DP World oo ay wadaan qaar ka mid ah Xildhibaanada Baarlamaanka,waxaana dhanka kale bar bar socda Qosrhe Imaaraadka Carabta ku doonayo inuu ku kala fur furo Xildhibanaada Mooshinka wada una helo Xildhibaanada qorshaasi ka yimaada.
Cumar C/rashiid oo hadda dalka aan ku sugneyn ayaa laga yabaa inta uusan dalka ku soo laaban lugta soo mariyo Imaaraadka carabta gaar ahaan Abu Dubai,halkaasina looga soo dhiibo qorshihii uu magaalada Muqdisho kaga howlgeli lahaa.
Dhaqaalo badan ayaa la filayaa iney Imaaraadka kaga baxdo Arrimaha hadda socda iyo mooshinka laga wado.